Oovimba be-BTC-Funda ukurhweba
I-Bitcoin Whales iqokelela iingqekembe ezingama-40K ngeentsuku ezimbini njenge-BTC HODLing Peaks Kwakhona
Iingxelo ezintsha zibonisa ukuba Bitcoin (BTC) idilesi yomnenga kunye ne-1,000 ukuya kwi-10,000 ye-BTC ifumene iingqekembe ezininzi kwiiyure ezingama-48 zokugqibela. Umboneleli we-Analytics uSantiment ubike ukuba iipaji ezinkulu zeBitcoin zifumene malunga neengqekembe ze-40,000 kwiintsuku ezimbini zokugqibela.
Okwangoku, inani leengqekembe ezilawulwa yimikhomo ye-BTC ibuyele kwinqanaba lokulahla kwangaphambili. Ukuqokelela okutsha nje okuye kwagcina ixabiso le-BTC ngaphezu kwe-$ 42,000 okwethutyana ngoku. Kwakhona, ubukho bemalike yeBitcoin burekhode i-spike ngexesha elinye nokwanda kokwanda. I-Santiment ichazwe kwingxelo yayo yamva nje ukuba:
“I-Bitcoin iye yaphinda yaphindaphindeka kwaye i- + $1,000 ngexabiso kwiiyure ezi-5 ezidlulileyo. Ngoku ehleli kwi-42.4K yeedola, oku kuza emva kokuba iminenga iqokelele i-40K ngaphezulu kwe-BTC kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo zodwa. Ngoku babuyele ekubeni babe nesixa esifanayo kwangaphambi kokuba ukulahla kwabo kuqale nge-49K yeedola.”
Abanini beBitcoin bexesha elide abakhange bathengise ngaphandle kokuphazamiseka ngo-2021
Ngalo lonke ixesha lokuwa kwemarike ye-crypto ngo-2021, abanini beBTC bexesha elide bahlala bengothuki kwaye bala ukulahla izinto zabo. Endaweni yoko, idatha ibonisa ukuba uninzi lwee-HODLers ziqokelele iingqekembe ezininzi ngexesha lokuncipha kwemarike.
Ngelixa i-Bitcoin kunye neemarike ezibanzi zikonwabele ukunyuka kwe-meteoric ngo-2021, iibhere ziye zalawula indawo ye-crypto ukuza kuthi ga ngoku ngo-2022. I-cryptocurrency ye-benchmark okwangoku ithengisa phantsi malunga ne-35% ukusuka kwi-69,000 yeedola ngamaxesha onke. Kwakhona, ngenxa yokuthengiswa okulandelelanayo, i-30% yazo zonke ii-BTC ezijikelezayo zobonelelo ziye zawela kwiilahleko ezingenakwenzeka. Umboneleli wedatha ekwitsheyini i-Glassnode ucacise:
“Njengokuba iibhere zisebenzisa uxinzelelo kwiqela labanini ngeniso, iinkunzi zeBitcoin zikhusela umgangatho obalulekileyo ngokwembali wePesenteji yoNikezo kwiMetric yeNzuzo. Obu bungakanani 'bobonelelo oluphezulu olunzima' luye lwakhuselwa kwiimeko ezimbini kule minyaka imbalwa idlulileyo: ngoMeyi 2020 - Julayi 2020, ixesha elizolileyo lokubuyisela emva kokuhla okugqithileyo ukusuka kuloyiko olunxulumene ne-Covid. NgoMeyi 2021-Julayi 2021, ixesha elibi kunye nelongezelekayo emva kwesiganeko sembali esihambisayo. "
tags Bitcoin, BTC, iindaba, ingxelo, Makhoba
I-Bitcoin Ibandezeleka kwi-Crash yokuqala kwi-2022 Ukulandela i-Hawkish Comments evela kwi-US Fed
Bitcoin (BTC) ekugqibeleni yabanjwa phantsi koxinzelelo lwe-bearish ehlala ixesha elide njengoko i-benchmark cryptocurrency yehla ukuya kwi-42,400 yeedola ephantsi kwiiyure zokuqala ngoLwesine. Okwangoku, i-BTC ithengisa i-$ 42,800 okanye -7.3%, ngokutsho kweCoinMarketCap.
Okwangoku, imarike ye-crypto ebanzi yabelana ngekamva elifanayo njengoko yehla nge-8.7% kwiiyure ezidlulileyo ze-24, okanye i-200 yeebhiliyoni zeedola. Okubangel 'umdla kukuba, umthamo worhwebo wehlabathi jikelele we-BTC wehla waya kwi-25.9 yeebhiliyoni zeedola ngelixa i-Tether (i-USDT) yenyuka yaya kwi-53 yeebhiliyoni zeedola kwi-swaps yehlabathi.
Abarhwebi abaninzi baye babhangisa ii-cryptoholds zabo kwaye babalekela kwi-stablecoins ukuya kwi-hedge ngokuchasene ne-crypto crash, benyusa ukungena kwii-asethi ezifana ne-USDT, USDC, kunye nezinye. Imboni ye-stablecoin ibambe i-58.8 yeebhiliyoni zeedola kwi-98.5 yeebhiliyoni zeedola kwizorhwebo izolo.
Kwakhona, imboni ngoku ilawula i-166.4 yeebhiliyoni zeedola ze-2.02 yezigidigidi zexabiso le-crypto market. Nangona kunjalo, i-stablecoins nayo yahlupheka, nangona incinci, ekuthengisweni kwangoku nje abaninzi bawa ngesenti enye okanye ezimbini ukusuka kwi-peg ye-1 ye-$.
Okwangoku, ukulawulwa kweBitcoin kwawa kwi-37.5% izolo, eyona ndawo iphantsi kakhulu ukususela ngoJulayi 2018. Kwakhona, idatha evela kwi-BTC Fear and Greed Index ibonisa ukuba imarike ikwindawo "yoloyiko olugqithiseleyo" kunye nenqaku langoku le-15.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo omawubukele- nge-6 kaJanuwari
Ukulandela ezinye izityhilelo ze-hawkish ezivela kwi-US Fed, i-BTC yafumana ukoyiswa okutyhafisayo ngamabhere njengoko yachitha ngaphezu kwe-7% kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. I-cryptocurrency ye-benchmark ngoku ibambelele kumgca wenkxaso we-$ 43,000, njengoko ukuchithwa kwaloo nkxaso kunokukhawulezisa ukuphazamiseka kwi-$ 41,000 - i-$ 40,000 yendawo yenkxaso.
Oko kwathiwa, iinkunzi zenkomo kufuneka zityhale amaxabiso abuyele kwindawo ye-pivot kwi-$ 45,650 ukuya kwi-44,670 kwiintsuku ezizayo ukumisa i-bearish bias yangoku, ngaloo ndlela ithintele ukuphahlazeka okupheleleyo kwinkxaso yengqondo ye-40,000 yeedola. Akukacaci ukuba iinkunzi zenkomo zizimisele ukuyikhupha njani le nto, ngokuqwalasela uxinzelelo oluhlaziyiweyo lwe-bearish kwimarike.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-44,000 yeedola, i-45,000 yeedola, kunye ne-46,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$43,000, i-$42,000, kunye ne-$41,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 809 zezigidi
I-Bitcoin irekhoda iHashrate entsha yeXesha lonke eliPhakamileyo phakathi kwamaxabiso aphantsi
Unyaka ka-2022 uqale ngenqaku elicothayo kunelilindelweyo Bitcoin (BTC), njengoko i-benchmark cryptocurrency yenza umsebenzi ophantsi ngaphandle koqikelelo oluninzi oluphezulu lokuqalisa konyaka. I-cryptocurrency igcine imbonakalo yomtyali-mali eyoyikisayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo phakathi kwethoni ye-bearish engapheliyo.
Nangona kunjalo, i-hashrate ye-Bitcoin yenze ngokuhlukileyo, njengoko irekhoda i-high-time entsha, ebonisa ukuba imisebenzi ephakanyisiweyo kwinethiwekhi yahlala ingathinteli.
Ngokutsho kwengxelo evela kwi-BitInfoCharts, i-hashrate ye-Bitcoin iye yagcina i-trajectory ephezulu ukususela oko yabetha iminyaka ephantsi ephantsi kwe-60 exahash ngesekhondi (EH / s) kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
Oku kwehla kwamandla e-hash kuza emva kokufuduka kwabantu abaninzi basezimayini be-BTC besuka e-China ngenxa yokuvalwa kwelizwe lonke kuyo yonke imisebenzi yemigodi ye-crypto kunye neyorhwebo. Nangona kunjalo, inethiwekhi irekhode ukuchacha ngokukhawuleza kolu nyikima, ibalaselisa amandla kunye nokomelela kwenethiwekhi.
Okubangela umdla kukuba, i-hashrate yokurekhoda i-ATH iza phakathi kwemibhiyozo ye-13th yenethiwekhi (usuku lweGenesis), ukususela kwibhloko yokuqala yembiwa ngoJanuwari 3, 2009. Umdali ongaziwa weBitcoin, uSatoshi Nakamoto, wemba ibhloko yokuqala ye-BTC, ebizwa ngokuba yiGenesis. Ibhlokhi, eyaqala ishishini le-crypto njengoko silazi namhlanje. I-Nakamoto yombiwa i-50 BTC kwi “Block 0” kanye kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo omawubukele- nge-4 kaJanuwari
Emva kokurhweba ngokuzolileyo kunye ne-bearish bias kuninzi lwe-2022, i-BTC ibonakala isetelwe ukurekhoda utshintsho kwisantya kwixesha elikufutshane. I-cryptocurrency ye-benchmark yawela kwinkxaso ebalulekileyo ye-$ 46,000 kwakhona izolo, kodwa iibhere ziswele ulungelelwaniso lokuthatha amaxabiso aphantsi, ukutywina ukusebenza kwaloo ndawo yenkxaso.
Oko kuthethiweyo, i-cryptocurrency ephambili irekhode ipateni esezantsi kabini kwiintsuku ezimbalwa emva kokurekhoda kabini phezulu, iqaqambisa ubungqongqo bomkhethe osecaleni. I-double-bottom ngokuqhelekileyo ibonisa ukuba i-bullish rally inokuba kufuphi nekona. Ngaloo nto, ndilindele ukuchacha kwindawo ebalulekileyo yeedola ezingama-48,500 kwezi ntsuku zizayo.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-48,000 yeedola, i-48,500 yeedola, kunye ne-49,500 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$47,000, i-$46,000, kunye ne-$45,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 877.5 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 39.4%
I-Bitcoin ngo-2022: U-Anthony Pompliano Uvakalisa i-2022 Predictions
Ukuhlaziywa: 2 January 2022
As Bitcoin (BTC) yaphela i-2021 ngendlela edizzy kwaye ngaphandle kwezinto ezilindelweyo ngabahlalutyi beemarike, abatyali-mali baziva ngathi baqala ngo-2022 ngokungaqiniseki okukhulu.
Oko kwathiwa, abahlalutyi ababalaseleyo botyalo-mali lwe-crypto u-Anthony Pompliano kutshanje babelane ngeengqikelelo zakhe kwishishini le-crypto ngo-2022, wongeza ukuba i-2022 iya kutshintsha indlela abatyali-mali abaninzi abajonga ngayo kwi-Bitcoin.
UPompliano ubalise indlela ukwamkelwa kwe-BTC okwenzeka ngayo umva “amaqela,” Ukuqaphela ukuba yaqala ngabantu abakwi-Intanethi kwaye emva koko yasasazeka kwimibutho yezemali nakwimibutho yemveli nakwilizwe elizimeleyo-i-El Salvador. Umhlalutyi uphinde waqaphela ukuba ii-behemoth Wall Street corporations ziye zaxinzezeleka ngakumbi ukuba ziqwalasele iqhinga leBitcoin, nokuba abanakufumana i-BTC i-asethi ekhangayo.
Ethetha ngexabiso le-benchmark cryptocurrency, uPompliano wavuma ukuba i-cryptocurrency ephambili ayizange iyenze icace indlela yayo njengoko ukungaqiniseki kuyaqhubeka kukhathaza imarike.
Ukongezelela, i-Pompliano ibhekiselele kwisihloko esiye sahlala kwiingqondo zabaninzi abahlalutyi-isenzo sexabiso lexabiso le-Bitcoin le-mirrored kunye ne-10-year Treasury isivuno. Olu phuhliso luhlala luyingxaki kubatyali-mali abaninzi njengoko luzisa ukubhideka ngakumbi kwisenzo sexabiso le-asethi. Nangona kunjalo, umhlalutyi waqaphela ukuba idatha eninzi iyafuneka ukubeka izinto ngendlela efanelekileyo kulo mbandela.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo omawubukele- nge-2 kaJanuwari
I-Bitcoin igcine i-bias engenamkhombandlela kunyaka omtsha. Nangona kunjalo, i-benchmark cryptocurrency ibambe indawo yayo ngaphezu kwenkxaso ye-47,000 yeedola, uphawu oluhle lweenkunzi.
Oko kuthethiweyo, ndilindele ukuchacha okuzinzileyo kwezi ntsuku zizayo ukuya kwi-48,000 yeedola. Nangona kunjalo, inqanaba lenkunzi emazithathwe kukuxhathisa kwe-48,500 yeedola, okunokuthi kuqalise i-bullish entsha ukuya kweyona nto ifunwa kakhulu emva kwe-pivot yeedola ezingama-51,400.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.24 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 894.7 zezigidi
I-Bitcoin yoTshintsho-ngeMrhumo we-Spike ngo-2021 njengoko iNethiwekhi i-Adoption iyanda
Ngokutsho kwedatha yakutshanje, ukusetyenziswa kwe-Replace-by-fee-inketho yentengiselwano kwi Bitcoin (BTC) womnatha okuvumela ukuba unyuse umrhumo kwintengiselwano emva kokuba ithunyelwe ukugqitywa ngokukhawuleza-yandiswe ngokuphindwe kabini ngo-2021. ibhloko elandelayo.
I-Bitcoinops ibonise ukuba i-Replace-by-fee (i-RBF) intengiselwano inyuke ukusuka kwi-14% ukuya kwi-28% ngo-2021. Ingxelo yabonisa ukuba phantse i-1 kwi-3 yentengiselwano kuzo zonke iibhloko ze-144 ze-BTC ziqeshwe ukhetho lokunyusa imali. Eli nqaku lenze ukuba liqale kwinethiwekhi kwi-2016 xa iGreen Wallet, eyayiyiGreenAddress, yaqala ukuxhasa esi sisombululo.
Oko kuthethiweyo, ukusetyenziswa kwe-RBF khange yenze inkqubela kangako kunyaka wayo wokuqala kuthungelwano. Nangona kunjalo, ngo-2018 ifikelele kwinqanaba le-5% yentengiselwano, kwaye ngo-2020 yafikelela ekusebenziseni i-10% yazo zonke iintengiselwano ze-BTC.
Nge-Q3 2020, ukuthengiselana kwe-RBF kuye kwaba yintsika kwinethiwekhi. Oku kwenzeke emva kwe-crypto boom, eyatsala amaziko amaninzi aqala ukuchitha i-BTC kakhulu. Ukuya phambili ngokukhawuleza ukuya ku-Okthobha ka-2020, uTshintsho ngeNtlawulo yabetha i-15%, kwaye ngo-Epreli ka-2021, yabetha i-20%. Ngelixa irekhode incopho ekufutshane ne-30% kulo nyaka, ibonakala isondeza unyaka kwi-27.5%.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-30 kaDisemba
Njengoko ndiqikelele kuhlalutyo lwangaphambili, i-BTC irekhode i-bearish ehamba phambili kwi-$ 46,000 ephantsi emva kokuvela kwephethini ephindwe kabini kwi-pivot ye-51,400 ye-pivot ngoMvulo. Ngokwesiqhelo i-bearish bout ilandela ukuvela kwale pateni njengoko siye sangqina kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo.
Oko kuthethiweyo, i-benchmark cryptocurrency ngoku ikwimishini yokubuyisela ukusukela oko kwehla. Nangona kunjalo, ithowuni ezolileyo kwimarike inokuphazamisa nayiphi na inzuzo enentsingiselo ye-bullish kwixesha elikufutshane kwaye inokuthintela isibini se-BTC/USD ngaphakathi kwepateni esecaleni ukuya kunyaka omtsha.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-48,00 yeedola, i-48,500 yeedola, kunye ne-49,500 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$46,000, i-$45,000, kunye ne-$44,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 886.9 zezigidi
I-Bitcoin luTyalo-mali olungcono kune-Fiat: Indoda yesiThathu-eSityebi yaseMexico
Indoda yesithathu esisityebi eMexico iphindaphindeke kabini kwiingxelo zayo ze-Bitcoin emva kokucebisa abantu ukuba baphephe iimali ze-fiat kwaye batyale imali. Bitcoin (BTC) endaweni yoko. URicardo Salinas Pliego wenze la mazwi kwividiyo efakwe kwi-Twitter, apho wayenqwenela abalandeli bakhe ukuncoma isizini.
U-Salinas ungumseki kunye nosihlalo we-Grupo Salinas, i-conglomerate yeenkampani ezinomdla kumacandelo ahlukeneyo, kubandakanywa unxibelelwano, imidiya, iinkonzo zemali kunye neevenkile ezithengisayo. Ngokoluhlu olutyebileyo lweForbes, i-billionaire ixabisa i-13 yeebhiliyoni zeedola.
Kusasazo lwakhe lwevidiyo, uSalinas waphawula ukuba:
“Suka kwimali yefiat. Idola, i-euro, i-yen, okanye i-peso - zonke ziyibali elifanayo. Yimali yomgunyathi eyenziwe ngephepha kunye nobuxoki. Iibhanki ezingoovimba zishicilela imali eninzi kunangaphambili. Tyala imali kwiBitcoin. "
Ngokucacileyo, i-billionaire yenza ezinye iinkcazo ze-Bitcoin kwixesha elidlulileyo. NgoNovemba, wathabatha kwi-Twitter ukuxelela abalandeli bakhe ukuba "Thenga i-Bitcoin ngoku," wongezelela ukuba i-US "Ijongeka ngakumbi njengalo naliphi na ilizwe lesithathu elingenankathalo." Ukuxhasa iinkcazo zakhe, usozigidi waphinda waxhoma itshati ebonisa into ayibizayo "ubungakanani bokwenziwa kwemali yomgunyathi."
NgoJuni, uSalinas wachaza ukuba uceba ukuvumela ibhanki yakhe ukuba yamkele i-BTC, ephawula oko"Ndincoma ukusetyenziswa kwe-bitcoin, kwaye mna kunye nebhanki yam sisebenzela ukuba yibhanki yokuqala eMexico ukwamkela i-bitcoin." Naye uyakukholelwa oko "I-Bitcoin yigolide entsha," ephawula ukuba "iphathekayo kakhulu."
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-28 kaDisemba
I-BTC yawa phantsi kwempembelelo ye-bearish izolo, ilandela enye inkcaso ukusuka kwi-51,400 yeedola eziphezulu. Oku kugatywa kubangele ukubunjwa kwephethini ephindwe kabini, ngokuqhelekileyo ibonisa ukuhamba okubukhali kwe-bearish.
Oko kwathiwa, ukuhla okubukhali okurekhodwe kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo kuza ngenxa yokubonwa kabini phezulu. Nangona kunjalo, iibhere ziswele ukuzola ukucinezela intshukumo ezinzileyo ukuya kwinkxaso ye-48,000 yeedola. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zinokubekwa ecaleni kwezi ntsuku zizayo ukuba ziyasilela ukulinyusa ixabiso libuyele kwindawo ebalulekileyo yepivot, apho kufuneka kuvele khona uvakalelo oluhlaziyiweyo.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-49,500 yeedola, i-50,000 yeedola, kunye ne-50,500 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$48,500, i-$48,000, kunye ne-$47,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.30 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 926.5 zezigidi
I-Bitcoin Holdings: i-El Salvador Ifumana i-21 eyongezelelweyo ye-BTC, ngoku ibamba iiNkozo ze-1,391
Umongameli wase-El Salvador, uNayib Bukele, ubhengeze ngoLwesibini ukuba ilizwe lithenge ngaphezulu Bitcoin (BTC). U-Bukele waqaphela ukuba ukuthengwa kwenzelwe ukukhumbula ukwenzeka kwememe malunga nenombolo ye-21.
UMongameli usasaze iindaba ngeposti kaTwitter, eqale ngokuthi: “Yonke ubukhulu be-El Salvador yi-21,000 km2. Ngebhaqo? Andicingi njalo!” I-tweet yongeza ukuba:
“Namhlanje lusuku lokugqibela lwama-21 kunyaka wama-21 kwinkulungwane yama-21. Ngeeyure ze-21: 00 ... Sithenga i-bitcoin ye-21 kweso sihlandlo. Ndiyithenga kude kube ngu-21:21:21.”
I-El Salvador iyaqhubeka nokuqokelela ngakumbi i-Bitcoin ukusukela oko yenze i-BTC ithenda esemthethweni ecaleni kwedola yaseMelika ngoSeptemba. Kubandakanya ukuthengwa kwayo kutshanje, isizwe saseMntla Melika ngoku siphethe i-1,391 BTC, ixabisa i-67 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela.
Ilizwe lenze ukuthengwa kwe-BTC yokuqala ye-400 iintsuku ezithile ngaphambi kokuba uMthetho weBitcoin uphunyezwe. I-El Salvador kamva yathenga ezinye iingqekembe ezingama-300 emva kokumiselwa komthetho.
Ngo-Okthobha, ilizwe lithenge iingqekembe ezingama-420 ngaphezulu ukukhumbula isiganeko sememe malunga nenani le-420. NgoNovemba, uBukele ubhengeze ukuthengwa kwenye i-BTC ye-100. Ukuthengwa okukhulu kwamva nje kwenzeka ekuqaleni kukaDisemba xa uMongameli Bukele wabhengeza ukuba “uthenge idiphu,” ukongeza i-150 BTC kwi-holdings yayo, ukuyizisa kwi-1,370 BTC iyonke.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-23 kaDisemba
Ukulandela ukuchacha kwayo kwisantya se-bearish esibangelwa yi-trendline yokuhla kweeveki ezininzi, i-Bitcoin iye yawela kwicala elisecaleni njengoko iinkunzi zeenkomo ziswele amandla okutyhala ngaphaya kwe-49,500 yeedola.
Oko kuthethiweyo, i-benchmark cryptocurrency kufuneka ikhusele unyawo lwayo ngaphezulu kwenkxaso ye-48,000 yeedola ukugcina umkhethe ohlaziyiweyo. Nge-50 SMA okwangoku ingaphantsi kwexabiso, kuhlala kungenakwenzeka ukuba i-BTC irekhode ukuhla okuzinzileyo ngaphantsi kwenkxaso yengqondo.
Ukuqhubela phambili, onke amehlo ngoku abekwe kwi-50,000 yeedola eziphezulu, njengoko abahlalutyi bahlala behlukene kwinto enokwenzeka. "Usanta Claus" irali.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.28 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 920.9 zezigidi
I-Bitcoin iBuyisela kwakhona njengoko uphononongo lutyhila iZiphumo ezinomdla zokuQikelela kwe-BTC
Ngokutsho kweengxelo zophando olutsha, kuphela iqela elincinci le-wallet libambe isabelo sengonyama Bitcoin (BTC). Ingxelo ibonise ukuba i-1% ephezulu ye-wallet ilawula ubutyebi obuninzi kunemizi emininzi e-US.
Okumangalisa ngakumbi, i-0.01% ephezulu yabanikazi beBitcoin balawula i-27% yazo zonke i-BTC ezijikelezayo. Iinkcukacha zavela kwingxelo yeWall Street Journal ngoDisemba 20, ichaza amandla okubonelela ngeBitcoin kunye nemimandla yoxinaniso.
Ngeli xesha, uphononongo olukhutshwe yi-National Bureau of Economic Research lubonise ukuba iidilesi eziphezulu ze-10,000 ze-BTC zigcinwe ngaphezu kwe-5 yezigidi zemali, ezixabisa malunga ne-$ 242.5 yezigidigidi ngexesha lokushicilela. Ingxelo ichaze oku njengexabiso eliphezulu lemarike kunenkampani ye-46th-inkulu kwihlabathi, i-ICBC.
Uphando luye lwaphawula ukuba kuqikelelwa ukuba i-114 yezigidi ze-wallets ze-BTC kwihlabathi jikelele, eli qela lincinci (i-10,000 wallets) lilawula i-27% ye-18.9 yezigidi zemali ejikelezayo ngoku. Nangona kunjalo, ingxelo ayiphumelelanga ukucacisa ukuba ezi dilesi zezotshintshiselwano okanye abagcini.
Ngaphezu koko, uluhlu olutyebileyo lwe-Bitinfocharts lwe-BTC lubonisa ukuba i-Binance wallets ebandayo, i-Binance yokugcina i-offline, i-wallet ezimbini eziphezulu phakathi kwe-10,000, ibambe i-433,490 BTC edibeneyo ngoku ixabisa ngaphezu kwe-21 yeebhiliyoni zeedola.
Amanani e-crypto abonisa ingxaki ekhulayo yokungalingani kobutyebi e-US-apho i-1% ephezulu yamakhaya ilawula malunga ne-75% yobutyebi obusekelwe kwingxelo ye-Federal Reserve.
Amanqanaba eBitcoin angundoqo oza kujongwa- nge-21 kaDisemba
I-BTC isanda kurekhoda i-7.5% ye-spike ngobusuku, ilandela ukubuya kwe-bullish kwi-Turkish lira (TRY). I-cryptocurrency ye-benchmark ichukumise i-$ 49,000 ephezulu kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngoku ayibonisi uphawu lokucotha.
Oku kuqhambuka kwe-bullish kuza kulandela ukuhla okuthe gqolo ngaphakathi kwe-bearish wedge. Oko kwathiwa, iinkunzi zenkomo ziya kwenza imali kulo mlenze phezulu kwaye zityhale i-benchmark cryptocurrency kwi-$ 51,500 - i-$ 50,500 yendawo ye-pivot kwiintsuku ezizayo, apho zinokuthi ziphule i-bearish yangoku kwimarike.
Nangona kunjalo, ukuwa ngaphantsi kwe-$ 47,000 - i-$ 46,000 uluhlu lunokuqhubela phambili i-bearish bias ixesha elide kwaye luvule iingcango kwi-$ 43,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 921.1 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 40.8%
← Entsha izithuba1 2 ... 45 abaDala izithuba →